Isiokwu:9 Dropshipping Business Name Mistakes to Avoid
Site: Fisayo March 16, 2018
Gịnị bụ Dropshipping?
Olee Dropshipping Works
First Ihe mbụ, Your Dropshipping Business Name
Gịnị mere na ọ dị mkpa Nweta Ọ Right
5 Kpatara Inweta Njọ
5 Ndenye Ụzọ n'ịwa Dropshipping Business Name mata echiche
9 Dropshipping Business akpọ Mejọọ Zere
Ịhọrọ a azụmahịa gị aha dropshipping store bụ a obere dị iche iche si na-ahọrọ a ahịa aha maka ndị ọzọ na ụdị nke ulo oru. Otú ọ dị, otu ụkpụrụ ahụ metụtakwara, ma ọ bụrụ na ị na-azụ ahịa nke na-akpọ na-ezighị ezi ọtụtụ ndị ọzọ na ihe ike na-aga nnọọ na-ezighị ezi. Nke a bụ a foundational nke.
E nwere nza nke dropshipping ulo oru si n'ebe, 500,000 (na-agụta) on Shopify naanị gbasaa gafee 175 mba. Your store aha nwere ike ma na-eguzo unu si ìgwè mmadụ ahụ na ọnọdụ gị maka dropshipping ịga nke ọma ma ọ bụ ngwakọta ị n'ime ndabere ebe ị mmiri iri na invisibility.
ekele, e nwere smart ụzọ zere nke a quagmire ma na-amụta iji nweta dropshipping ahịa ma ọ bụ azụmahịa nke na-akpọ nri.
N'ihi na ọ bụ otú mfe ịmalite dropshipping, dropshippers nwere ọchịchọ ahapụ a na-abụghị ndị na-arụ ụlọ ahịa na-emeghe ọzọ, ma ọ bụrụ na isi nsogbu bụ azụmahịa gị akpọ ụkpụrụ, ị chọrọ ịmụta otú n'ịwa ezi azụmahịa aha echiche maka ọdịnihu gị dropshipping echekwa.
Na nke a post anyị ga-inyocha ins na outs nke ị na-ahọrọ a ahịa gị aha dropshipping azụmahịa, ma mbụ
Dropshipping bụ ecommerce ọkọnọ yinye azụmahịa nlereanya na-enye ohere ị na-mkpọsa enweghị akpa ịzụta anụ ahụ ngwaahịa ma ọ bụ na-atọ ndị yiri nkata.
ebe a bụ
N'okpuru ebe a bụ a nkenke nkọwa dropshipping na 5 mfe nzọụkwụ:
Ị na-egosipụta na-emepụta ma ọ bụ suppliers ngwaahịa gị retail website na a nkè,
Shoppers agagharị na ebe iwu na ị
Ị na-ewe gị uru, na
Forward ahịa iwu ka gị suppliers ma ọ bụ na-emepụta, onye
Mezuo ma ọ bụ nyefee ngwaahịa na gị na ndị ahịa
First Ihe mbụ: Your Dropshipping Business Name
E ihe ole na ole ị ga-mkpa ịmalite dropshipping ka:
PC ma ọ bụ laptọọpụ
Pụrụ ịdabere na njikọ Ịntanetị
Dropshipping Platform, e.g. Shopify (abịa na ngalaba aha, wdg), free 14 ụbọchị ikpe, na-amalite mgbe $ 29 / knife, $9/knife maka Shopify Lite
A ngwaahịa ma ọ bụ niche
Pụrụ ịdabere na suppliers ma ọ bụ na-emepụta
An akpaaka ngwa dị ka Oberlo, (free Starter mkpọ), mgbe $ 29 / knife maka isi ngwugwu, wdg
ma, otu n'ime ihe ndị kasị mkpa ihe ị chọrọ bụ a ọma azụmahịa gị aha dropshipping store.
Gịnị mere na ọ dị mkpa Nweta ya Right
Dị ka e kwuru na mbụ, i nwere ike na-amalite dropshipping na n'ụzọ nkịtị efu dollars. N'ihi nke a na ihe ụfọdụ na-a tụrụ.
Anya isi na ị na-eto eto na ọnụ ọgụgụ ngwa ngwa ma na-uche nke nnukwu egwuregwu onye trademarked aha tupu-ụbọchị na yiri gị, ị nwere ike ịbụ na ihe a iwu tussle, na ọ na-aghọ ihe siri ike hapụ gị na-eto eto azụmahịa n'ihi azụmahịa aha metụtara mbipụta.
N'ihi ya mkpa ka ị enweta ya site na mmalite. Itu ọzọ ìhè,
Legal agha nke nwere ike ime azụmahịa gị ma ọ bụ na-eri gị nke ukwuu na mmezi
Loss nke ahịa isi
Loss nke metụtara na-elekọta mmadụ media peeji nke na akaụntụ
Emelite gị niile digital akụ iji na-egosipụta ọhụrụ ọnọdụ
Oké ọnụ rebranding mgbalị
Iji tinye ya n'ọnọdụ, kwuru na-egosi na a chọrọ mgbanwe nke aha si UTA ka TDU (akpọ t-duh) nwere ike na-eri Utah-atụ ụtụ isi banyere $ 50m mejuputa.
N'otu aka ahụ, ngalaba cars.com kọrọ ere a whopping $ 872m.
Ebe ahụ kwuru na,
Ugbu a na ị maara na ọ dị mkpa nke na-gị dropshipping azụmahịa aha nri, ebe a na- 5 ngwa ụzọ ịmepụta mara mma azụmahịa ma ọ bụ ụlọ ọrụ aha echiche:
A azụmahịa aha generator dị ka aha na-egosi bụ ihe online software ma ọ bụ ngwá ọrụ na-enyere gị aka n'ịwa azụmahịa aha echiche gị dropshipping store, ya mere na ị na-adịghị na-eme ya aka.
Quora bụ a na-ewu ewu Q&A forum ebe òtù ịjụ òtù ajụjụ ma na-aza ha ajụjụ ọ bụla isiokwu okwu. E nwere ihe upvote mma na-enye ohere ndị ọzọ so mkpịsị aka elu ma ọ bụ nkwado azịza nyere òtù. Ha nwere ike inye aka na echiche maka gị dropshipping store.
Ezinụlọ na Ndị Enyi
Ọ bụrụ na i bu n'obi na-agba ọsọ a mama m n 'Pop style dropshipping store, na-azụ ahịa aha aro site enyi na ndị ezinụlọ bụ a fun ụzọ na-amalite si.
Ị nwere ike n'ezie ejedebe na a n'ezie oyi aha na nkenke na-akọwa gị dropshipping azụmahịa.
N'ebe ezinụlọ na ndị enyi, ìgwè mmadụ sourcing-enye gị ohere isi n'ihi ụlọ ọrụ aha echiche site a ìgwè mmadụ nke nkà freelancers maka ego.
E nwere ọtụtụ ndị dị otú ahụ na saịtị dị ka CrowdSpring, Fiverr, Upwork, wdg.
Ọzọ nhọrọ bụ iku ọkà azụmahịa copywriters ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndị nwere ike ịghọta azụmahịa gị mgbaru ọsọ ma na ebumnobi na craft kenha azụmahịa aha ya.
Ugbu a anyị ka anyị hụrụ ụzọ ụfọdụ n'ịwa azụmahịa aha,
ebe a na-,
9 Dropshipping Business akpọ Mejọọ Zere na All Cost
Ịhọrọ a aha na-ada ka Amazon
Yeah, anyị niile maara Amazon bụ nnukwu ihe, na-eweta isi emeghasịkwa na retail na ilo fọrọ nke nta niile na ya na ụzọ.
Ma na-eji a aha na Amazon na o nwere ike ịbụ na-eduhie eduhie na ike imebi ihe si dị iche iche akụkụ dị ka na ezigbo Amazon, online shoppers na iwu.
Tinyere Okwu Dropshipping na Aha gị
E nwere ihe a n'ozuzu uzọ na dropshipped ngwaahịa na-eri ihe na nkezi. Nke a bụ n'ihi ukwuu n'ime ka ịzụ na retail price na nke ukwu nke na-eme ka o siere dropshippers na-ere na-enweghị a nkè.
Agbakwunye okwu dropshipping (ma ọ bụ ya nke ọzọ ọdịiche) azụmahịa gị aha nwere ike iziga na-ezighị ezi n'ókè banyere gị ahịa ab initio.
Iji Geo-Ekwe Mmadụ Megharịa Names
Iji a aha dị ka DropshipTexas ga-ike echiche na i na-arụ ọrụ n'ime ma ọ bụ nyefee na Texas. Nke a ga-achụpụ nwere ahịa na-adịghị ebi ndụ ma ọ bụ na gburugburu Texas.
Dropshipping na-enye ohere ị na-ere n'ụwa nile mere adịghị tie aka gị na a geographically restrictive aha.
Nke na-akpọ gị Store Mgbe a Niche
Ụfọdụ dropshipping niches bụ ultra n'oge a kara aka, ebe a oge a na-arahụ na-esote. Nke na-akpọ gị dropshipping store mgbe ndị dị otú ahụ niches na-nnọọ na ịmachi, na akwa ndudue zere na niile na-eri.
A ezi aha ga-ekwe ka ị na-agbalị dị iche iche niches nke dropshipped ngwaahịa enweghị mkpa ịgbanwe ụlọ ahịa aha mgbe.
Ịhọrọ a aha na Malite Obere echiche
Nke a bụ dị iche iche site na niche-akpọ. N'ihi dropshipping si ala mmalite isi obodo, ụfọdụ dropshippers họrọ ụlọ ọrụ aha na a mgbu "obere" azụmahịa echiche.
N'ihi ya, mgbe ibu na-abịa ha nwere ike mkpa a aha mgbanwe nke na-abịa na ya nsogbu.
Iji a Name anagide Gị olumba
Iji a aha peculiar gị ebo, ire ma ọ bụ ndị mmadụ nwere ike na-kasị mma maka gị dropshipping azụmahịa.
Ọ bụrụ na i nwere ikwu na ikpo aha maka ndị mmadụ oge ọ bụla, mgbe ahụ, ọ na-eleghị anya ọ bụghị ajụkwa ezuru.
Ike mkpoputa gị Dropshipping Store Name
Ọ bụrụ na ị bulie aha peculiar gị olumba ịma aka ọzọ ga-ala nke mkpoputa ma ọ bụ pronunciation nke na-abụghị ala okwu gị olumba.
Nke a nwere ike ịpụta na ọdịdị na search results na organic okporo ụzọ nke ị ga-mkpa ka na-eto eto gị ụlọ ahịa.
Ị na-Ileghara International Ahịa
N'ihi dropshipping-enye gị ohere iji na-ere n'ụwa nile na irite mba ọzọ mgbanwe, mkpa ka ị tụlee gị ahịa ná mba ndị ọzọ na omenala.
Na fancy azụmahịa aha nwere ike ịpụta "gold" gị olumba na pụtara "na na na" na asụsụ ọzọ, nke pụtara na ha ga-efek gị ụlọ ahịa. Ya mere eme gị research.
Suppliers Misspell Aha gị na Akwụkwọ ọnụahịa ma ọ bụ ọzọ na-Product Packaging
Ọ bụrụ na aha gị dropshipping store bụ ike ikpo, suppliers nwere ike misspell ya na akwụkwọ ọnụahịa ma ọ bụ ngwaahịa nkwakọ, nke bụ ihe ọjọọ n'ihi na mbọn dị ka abụọ na ngwaahịa si abụọ suppliers nwere ike ịsụpe aha gị dị iche iche.
Ahịa nwere ike hapụ ha obi ma ọ bụrụ na ọ akuko anọgide. Gbaa mbọ hụ na gị ziri ezi azụmahịa aha na-rubere suppliers.
Inweta gị dropshipping azụmahịa aha nri ga-azọpụta gị nchegbu na-echegbu onwe. Soro ndị a Atụmatụ n'ịwa mma azụmahịa aha echiche oge ọzọ.
Amos Onwukwe bụ AWAI zụrụ Ecommerce B2B / B2C Copywriter agba na eCommerce Insights, ecommerce Nation, Understanding Ecommerce, SmallBizCub, ịga nke ọma mmalite 101, Ogbi Little Man, Huffington Post, Floship, ịkpata First, The Next Scoop, SABTrends, BusinessTips.Ph banyere ole na ole.
ọ bụ maka hire
-Akpa na-ekwu okwu on "9 Dropshipping Business Name Mejọọ Zere na All Cost"